Oppo Find X2 Pro na-apụ apụ na nyocha ọdịyo na nke ụda [Nyochaa] | Gam akporosis
Oppo Find X2 Pro karịrị echiche na nyocha ọdịyo na ụda [Nyochaa]
Amalitere na mbido Machị ka ọkọlọtọ kachasị elu nke Oppo, Choo X2 Pro, nwanne nwoke nwoke okenye nke Find X2, etinyeworị ọnọdụ dị ka otu n'ime smartphones kachasị mma kacha elu na 2020 a.
Ọ dị ntakịrị ihe ngwaọrụ a nwere inye, ma pere mpe ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ọ nwere chipset Snapdragon 865, SoC kacha ike Qualcomm taa, yana ngosipụta ngosipụta ume 120Hz. Ewezuga nkọwa abụọ a, njirimara ndị ọzọ na nkọwapụta teknụzụ dịkwa na ụdị a nke mere ka ọ pụta ìhè; otu n'ime ngalaba ebe ọ na-eme nke ọma bụ na ụda na ụda, na DxOMark, site na nyocha ọhụụ, gosipụtara nke a.
1 Nke a bụ ihe DxOMark na-ekwu maka ọdịyo na ụda Oppo Find X2 Pro
1.1.2 Di omimi
1.2.2 Di omimi
Nke a bụ ihe DxOMark na-ekwu maka ọdịyo na ụda Oppo Find X2 Pro
Onu na olu nke Oppo Find X2 Pro | DxOMark
Na mkpokọta akara nke 74, Oppo Find X2 Pro bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma maka arụmọrụ ọdịyo nke DxOMark tụrụ ugbu a. Na nyocha ndị a na-achọgharị, chọta X2 Pro nwee ike 'itinye onye na-ege ntị aka', ọkachasị mgbe ọ na-ekiri ihe nkiri ma ọ bụ na-egwu egwuregwu, ekele maka ọnụnọ bass siri ike, mmetụ obi ụtọ na-ada ụda olu dị nro na nke na-akpọghị aha, ebe dị mma na ihe ole na ole. Agbanyeghị, etiti etiti etiti anaghị ekwekọ ma mechie ọnụ, nke, yana ụda na-ada ụda, na-emebi nsụgharị nsụgharị na izi ezi nke ọma.
Na ndekọ, Chọta X2 Pro dị n'etiti ndị kachasị mma maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ àgwà niile. Site na ndọtị dị ala, njedebe sara mbara, mmụba dị mma, na arịa dị ole na ole, ekwentị ekwentị na-enye arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, ọkachasị na ọgba aghara ma ọ bụ gburugburu ebe obibi. Agbanyeghị, enwere ike ịkwalite olu kachasị elu na etiti etiti anaghị agbanwe agbanwe.
Isi okwu ndị DxOMark nwalere na ndị otu ya ndị ọkachamara ka nọ n'okpuru, mana, tupu ịkọwa ha, anyị depụtara nkọwapụta ọdịyo na nke ekwenti:
Key audio ụdịdị:
• Ndị na-ekwu okwu zuru ezu (etiti elu na aka nri ala).
• Enweghị ọkpọkọ isi okwu (USB-C nkwụnye gụnyere).
Ntinye aka nke DxoMark na-atụle otu ekwentị si emegharị ụda n'ogologo ụda a na-anụ ma na-echebara bass, mids, treble, tonal balan balan, na olu.
Oppo Find X2 Pro na-enye arụmọrụ dị mma, ekele dị ukwuu maka tonal zuru oke na, dị ka a kpọsara, ọnụnọ bass siri ike. Mgbatị miri emi dị ala na-enye ohere maka ahụmịhe na-ege ntị na-ege ntị, ọkachasị mgbe ị na-ekiri ihe nkiri ma ọ bụ na-egwu egwuregwu.
Ekele maka mmegharị bass dị ike, arụmọrụ Find X2 Pro dị mma karịa olu maka usoro atọ niile dị na otu a: ọgụ, ntụpọ, na nkenke bass. Ke ofụri ofụri, ke adụ olu, Ekwentị Oppo karịrị ndị niile na-asọmpi ya na ụbọchị.
Na ọnụ ọgụgụ dị elu, akara nke abụọ ka dị ezigbo mma, ọ bụ ezie na nkenke ọgụ na bass na-emetụta ụda olu na-ada ụda. Ka olu na-abawanye, nkenke na-ebelata, a na-agbanyekwa mwakpo ahụ na oke olu.
Ndị ọkà okwu dị elu na nke dị ala na-enye ezi ọnọdụ gbasara oherekarịsịa maka ịchọta ụda isi iyi na ngwakọta. Iguzozi dịkwa mma, ebe mbara, ọ bụ ezie na afọ ojuju, adịchaghị mma dị ka ngwaọrụ dị elu. Anya nghọta dị oke mma na ihe nkiri ma na-agbanwe agbanwe na ụwa, ọ bụ ezie na ọ na-emetụta mgbasa ozi na-adịghị mma.
A na-edepụta Oppo Find X2 Pro dị ka ekwentị nwere igwefoto kachasị mma na ogo DxOMark [Nyocha Igwefoto]
Nnwale olu DxOMark na-atụle ma mkpokọta olu ngwaọrụ nwere ike ịmepụta na ịdị mma nke olu na-ebili ma daa dabere na ntinye ndị ọrụ.
Olu olu nke ekwentị na-eche ihe okike, oke kachasị dị mma. N'otu oge, usoro ole na ole mbụ nke olu na-ada oke ụda maka ọdịnaya dị elu, mana doo anya ma nwee nghọta maka ọdịnaya dị elu dị ka egwu oge gboo.
Ogwu a na-egwu site na ndị ọkà okwu Find X2 Pro na-ata ahụhụ ihe ole na ole ma ọ bụ enweghị. Na mgbakwunye na mgbagha bass na ụda olu dị ala, nke a ga-atụ anya na ngwaọrụ ndị dị otú ahụ, Oppo na-arụ nnukwu ọrụ nke ịchịkwa ụda na-achọghị, na-enye ngwa ọrụ ọhụụ kachasị ọhụrụ akara akara dị mma na nke a.
Site na akara 79, Oppo Find X2 Pro na-ekwe nkwa ịgba egwu dị mma na DxOMark niile. Ọbụna ọ na-eti Mi 10 Pro na iPhone XS Max n'ogologo bass niile.
Mgbatị dị elu dị mma dịkwa mma. Agbanyeghị, n'ogo dị elu, etiti etiti nwere ike ịdị karịa na obere njedebe dị mkpụmkpụ.
Igwe okwu Oppo Find X2 Pro na-arụ ezigbo ọrụ nke ichebe gburugburu olu nke olu ahụ.. Imirikiti ihe eji eme ihe na-egosi nsonaazụ dị mma, ọ bụ ezie na arụmọrụ dị egwu nke ngwaọrụ na gburugburu mkpọtụ bụ naanị nkezi, n'ihi nkenke nkenke nke envelopu ahụ.
Ọrụ gbasara ohere, ebe ọ na-enye afọ ojuju, dị iche n'akụkụ ndekọ. Oge nke a, njupụta bụ ahụkebe, na Chọta X2 Pro ịtọ ntọala ọhụrụ n'etiti ngwaọrụ DxOMark nwalere ruo ugbu a.
N'aka nke ozo, uda olu dara ụda metutara ebe a mgbe ị na-eji igwefoto selfie. N'ihe ọ bụla eji eme ihe (ụlọ nzukọ, vidiyo ndụ, na ndị ọzọ), ikike ịkọwapụta ka dị oke mma ma nnọchite anya dị mma.
The Find X2 Pro na-emepụtakwa ụda n'ozuzu ya nke ọma ma na-arụ ọrụ nke ọma n'okwu niile anwalere ma e wezụga n'oge nzukọ ebe ọ nwere ike ịchọrọ ntakịrị mmelite. Ọ bụ ezie na oke max dị mma n'ozuzu ya, nwere ndapụta ọghọm dị elu nke njedebe oge ụfọdụ.
N'ozuzu, Ihe a na-egere egere na-enweta site na arịa dị ole na ole, ọbụlagodi na mpaghara mkpọtụ. Agbanyeghị, mgbagha na ntụgharị okwu nwere ike ime oge ụfọdụ, na mgbatị dị elu nwere ike ime ka ọ maa jijiji.
N'ihi ndọtị miri emi dị ala nke ekwentị na ikike ịchịkwa arịa, ndabere playback bụ ihe ziri ezi na ezikarịsịa na gburugburu mgbagwoju anya. Nke ahụ kwuru, ụda mkpọtụ dị n'okike ma na-adịchaghị ike ime ihe eji eme ụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Oppo Find X2 Pro karịrị echiche na nyocha ọdịyo na ụda [Nyochaa]
Google mechara were ihe ojoo Chrome Web Store mee ihe ojoo
Xiaomi Mi Note 10 Lite ga-enwe batrị na-anaghị agwụ agwụ